Phimosis, waa cudur aad ugu badan xubinta taranka ninka | Ragga Stylish
Villamandos | | Caafimaadka
La phimosis es mid ka mid ah cudurrada ugu badan ee ku dhici kara xubinta taranka raggaIn kasta oo ay badanaa ku dhacdo inta badan carruurta, kuwaas oo 95% iyaga oo aad u da 'yar ay badanaa ku dhacaan cudurkan, waxay u muuqan kartaa sababo kala duwan oo ku dhaca dadka da' kasta. In kasta oo waxa dad badani aaminsan yihiin, ay xal u leedahay dhammaan xaaladaha oo dhan in kasta oo bogsiintu badanaa xanuun iyo daal badan tahay, haddana waxay ku dhammaataa in waqti lagaga adkaado.
Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato macluumaad ku saabsan dhibaatadan, astaamaha ay leedahay, dhibaatooyinka ay sababi karto iyo talo ku saabsan daaweynta, soo qaado qalin iyo warqad, waxaad u baahan doontaa inaad ku qorto waxyaabo badan oo aan u soconno kuu sheegi doono oo kuu sharxi doona maqaalkan oo dhan.
1 Waa maxay phimosis?
2 Maxay phimosis ugu muuqataa guska ninka?
3 Kuwani waa astaamaha ugu muhiimsan ee cudurka phimosis
4 Noocyada phimosis
4.1 Phimosis jirka
4.2 Phimosis cudurada
5 Darajooyinka phimosis
6 Waa maxay daaweynta loo yaqaan 'phimosis'?
7 Dhibaatooyinka suurtogalka ah ee phimosis
8 Filashooyinka laga gudbo phimosis
Waa maxay phimosis?
Kahor intaanan kuu sheegin sida loo ogaado inaad ku xanuunsan tahay cudurka phimosis iyo sida aad ugu baahan tahay inaad isku daydo inaad xalliso dhibaatadan, waa inaad ogaataa waxa phimosis uu yahay si cad oo cad.
Farsamo ahaan waxaan wajaheynaa cillad aan caadi aheyn maqaarka oo daboolaya qeybta ugu dambeysa ee guska, oo loo yaqaan buuryada. Maqaarkan dhamaadka xubinta taranka ee ragga ayaa aad u cidhiidhi ah, taas oo aan u oggolaanayn in indha-indheynta la muujiyo, mararka qaarkood gebi ahaanba iyo marna qayb ahaan. Dhacdadani waxay ku dhici kartaa labadaba guska kacsan iyo xaalad dabacsan.
👨‍⚕️ Qabashada ama yeelashada phimosis saameyn kuma yeelaneyso cabirka guska. Laakiin haddii aad weli ka mid tahay raggaas kuwa qaar raadinaya talo si aad u kordhiso guskaaga amaan ah, waanu kugula talineynaa ka dajiso buugga Master-ka guska halkan
Mid ka mid ah jahwareerka ugu caansan waa aaminsanaanta inaad leedahay phimosis, marka dhab ahaantii aad si fudud u haysato frenulum gaaban. Haddii shaki jiro ama la ogaado qaar ka mid ah labadan dhibaato, waxaa lagama maarmaan ah in loo tago takhasusle si loo ogaado cudurkeenna loona qoro daaweyn habboon.
Maxay phimosis ugu muuqataa guska ninka?
Waxay u dhawaaqeysaa wax aad loola yaabo laakiin dhammaan dhallaanka, dabcan, waxay leeyihiin a phimosis jireed taas oo inta badan xallisa iyada oo aan wax faragelin ama daaweyn ah lahayn. Koox yar ayaa u baahan doonta daaweyn ay awoodaan inay kaga adkaadaan iyaga oo aan haysan dhibaatooyin badan ama dhibaatooyin badan.
Farsamo ahaan, phimosis wuxuu u muuqdaa wixii horey loogu sharaxay kor, taas oo ah, by khaladaadka ku dhaca maqaarka korkiisa buuryada. Nasiib darrose ma jiro sharaxaad la taaban karo oo ku saabsan muuqaalka cudurka phimosis.
Kuwani waa astaamaha ugu muhiimsan ee cudurka phimosis
Phimosis inta badan kiisaska waxay soo bandhigaan astaamaha soo socda ee bukaanada badankood;
Muraayadaha xubinta tarankeennu ma muujinayaan qayb ahaan ama gebi ahaanba. Markaad isku deyeyso inaad ogaato, xanuunadu badanaa way daran yihiin
Xanuun markaad kaadido Socodka kaadida waa hagaag yahay waana la leexin doonaa inta badan kiisaska. Intaas waxaa sii dheer, waxaa suurtagal ah in buuryada buuryadu ay bararaan marka la kaadiyo. Il gaar ah ku hay astaamahan suurtagalka ah maxaa yeelay badanaa waxay ka mid yihiin kuwa ugu caansan
Xanuun inta lagu jiro kacsiga taas oo noqon karta mid aad u kacsan mararka qaarkood, mararka qaar waxay naga celisaa inaan galmo buuxda sameyno
Barar isdaba joog ah oo ku dhaca xubnaha taranka iyo maqaarka oo markale sababi kara xanuun daran
Haraaga Whitish wuxuu si isdaba joog ah uga soo muuqan karaa dusha sare taasi waa sababta nadaafadda dhow ee cilladaysan ee ka dhalanaysa suurtagal la'aanta in la gooyo buuryada. Sii iyaga ahmiyada lama huraanka ah, maxaa yeelay mararka qaarkood waxaa sababi kara waxyaabo kale oo aan ku noqon karin phimosis sida oo kale
Haddii ay dhacdo inaad leedahay dhowr ka mid ah astaamaha aan soo sheegnay, waxaa fiican inaad sida ugu dhakhsaha badan u tagto si aad u hesho takhasusle aad ku sameyso baaritaan aagga isla markaana aad u xallin karto dhibaatooyinkaaga sida ugu dhakhsaha badan. Haddii aad dhibaatadaada dhinac iska dhigto, waxay noqon kartaa in dhawr maalmood ama toddobaadyo ka dib ay wax waliba noqdaan kuwo sii murgsan.
Caadi ahaan maahan wax loo bartay in lagu wargeliyo, laakiin waxaa jira laba nooc oo kala duwan oo ah phimosis
Waxaan horey uga soo hadalnay noocan phimosis bilowga qodobkaan, iyo Waa midda ku dhacda ilmaha dhalashada markay dhashaan. Maalmuhu markay socdaan, buuryada dhallaanka cusubi waxay helayaan dabacsanaan wayna sii ballaaranayaan ilaa dib looga soo celiyo dhibaato la'aan. Haddii dhibaatadu sii socoto sanadaha, waxaan ka hadlaynaa nooc kale oo phimosis ah oo aan ahayn mid cudurada keena.
Noocan phimosis waa mid aad u yar, laakiin wuxuu ku dhici karaa ragga da 'kasta ha ahaadeene infekshannada ama nabarrada sameysma unug cusub bogsashada ka dib ha u oggolaan in la ogaado indha-indheynta si guud oo caadi ah. Haddii ay dhacdo inaad dhibaatadan leedahay, waxay muhiim u noqon doontaa inaad u tagto dhakhtarka si uu noo baaro oo noogu qoro daaweyn.
Mar labaad, ninku wuxuu yeelan karaa phimosis, laakiin sida ay u noqon karto nooc ama nooc kale, waxay sidoo kale noqon kartaa hal darajo mid kale. Darajooyinkani waxay u dhexeeyaan V oo aan ku ogaan karno indha-indheynta si dhammaystiran, illaa I taas oo aan ciribtirka lagu ogaan karin sinnaba.
Hoos waxaan ku muujineynaa oo sharxeynaa darajooyinka kala duwan ee phimosis jira;
GRADE I: punctate, buuryada gadaal lama soo celin karo glans
Fasalka II: daloolin, maqaarka hore ee jirka ayaa si yar dib looga noqon karaa, hilibka kaadi mareenka waa la arki karaa
Fasalka III: buuryada gadaal ayaa loo rogi karaa bartamaha muruqyada
Fasalka IV: buuryada gadaal ayaa loo rogi karaa oo kaliya wax yar ka sarreeya taajka cirbadaha
Fasalka V: waxaa jiri lahaa ka noqosho dhameystiran marka laga reebo in giraan giraanta la arki karo
Waa maxay daaweynta loo yaqaan 'phimosis'?
Waxay kuxirantahay nooca iyo heerka phimosis ee aan ku xanuunno, daaweyntu waxay noqon doontaa mid ama mid kale, xaaladaha oo dhanna waa inuu dhaqtar qoraa. Baadhista iyo daaweynta naftaada nooc kasta iyo darajo phimosis waxay noqon kartaa wax aan jirin, oo waliba aad iyo aad u xanuun badan.
Daaweynta Corticosteroid. Daaweynta noocan ah waxaa loo muujiyaa carruurta 3 sano iyo wixii ka weyn. Xaaladaha badankood waa kareemooyin aan ku awoodi doonno inaan ku kala soocno maqaarka buuryada gadaashiisa tartiib-tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah. Xaaladaha badankood, daaweyntan waa lagu guuleystaa, in kasta oo haddii ujeeddada aan la gaarin, aan u laaban doonno takhtarka takhasuska leh si mar labaad loo baaro oo aan u qorno daaweyn cusub.
Daaweynta qalliinka. Waa waxa loogu yeero gudniinka oo looga dhaqmo dadka waaweyn iyo carruurta, guud ahaanna suuxdinta maxalliga ah. Waxay ka kooban tahay ka saarida qaybta buuryada ee ka horjoogsata in glanku si buuxda u soo shaac bixin. Haddii aysan jirin wax dhibaatooyin ah oo soo baxa, oo aan ahayn inay soo baxaan, tani waa wax fudud oo faragelin caafimaad ah.
Dhibaatooyinka suurtogalka ah ee phimosis
Phimosis xaaladaha qaarkood waxay u horseedi karaan dhibaatooyin qaarkood. Kuwani waxay noqon karaan kuwo halis ah xaaladaha qaarkood, laakiin inta badan xanuun badan kiisaska badankood.
Waa kuwan dhibaatooyinka ugu badan ee ka dhalan kara cudurka phimosis;
Waxaa laga yaabaa in dhibaatada ugu caansan uguna daran ay tahay paraphimosis, oo ka kooban caabuq caleemaha markii buuryadu dib ugu noqoto saldhigeeda oo aan ku soo laaban karin sinaba si ay u tidhaahdo, booskeeda caadiga ah
Caabuqa kaadiheysta. Haddii aadan awoodin inaad u hesho aagga nadiifinta saxda ah, infekshan noocan ah ayaa dhici kara
Fursadaha kordhay ee qaadista cudur galmada lagu kala qaado
Fursadaha la ildaran kansarka guska kordhin
Raaxo-xumo suurtagal ah marka galmo la sameynayo maadaama muruqyada si buuxda aan loo ogaan karin
balanitis iyada oo ay ugu wacan tahay la'aanta nadaafadda saxda ah, taasoo keenta barar iyo casaan ka soo baxa maqaarka iyo maqaarka
Waxaa jira dhibaatooyin yar oo dheeri ah oo ka imaan kara cudurka phimosis, laakiin xaaladaha badankood ma ahan kuwo aad u badan sidaa darteed waxaan go'aansanay inaan ka boodno.
Filashooyinka laga gudbo phimosis
Phimosis Waa cudur, sidaan horeyba u sheegnay, oo aad ugu badan ragga, waana laga adkaadaa xaaladaha badankood qaab fudud oo dhakhso leh, inkasta oo mararka qaarkood taasi ay la socoto xoogaa xanuun oo ay tahay inaad ka fogaato xoogaa ka badan dhaqamada caadiga ah. Haddii ay dhacdo in goor dambe la ogaado, waxay nagu keeni kartaa xoogaa dhibaato ah, laakiin xaaladaha badankood waxaa suurtagal noqon doonta in si dhaqso leh loo helo nolol gebi ahaanba caadi ah.
Waxaan kugula talineynaa inaad yeelato rajooyin sare oo bogsasho ah iyada oo aan la helin dhibaatooyin badan oo isla waqtigaas aad ku ogaato, midkood ilmahaaga ama naftaada, qaar ka mid ah astaamaha ugu caansan ee phimosis, waxaad u tagtaa takhtar takhasus gaar ah u leh baaritaanka aagga iyo go'aan qaadan karo iyadoon la daahin. Xaaladaha badankood, phimosis way adag tahay markaad isku daydo inaad adigu xalliso adoo akhrinaya maqaallo aan macquul ahayn oo ka jira boqollaal shabakadda shabakadaha ama isku dayaya inaad qariso, wax aan waligood ka dhigi doonin inay wax hagaagaan.
Diyaar ma u tahay inaad wajahdo phimosis ogeysiis iyo diyaar garow?.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Caafimaadka » Phimosis, waa cudur aad u badan oo ku dhaca xubinta taranka ninka
Iga raali noqo, sida muuqata buuryada gadaal kama laabato dhalaalaha waxaan udhaxeeyaa fasalka 2 iyo 3 mar markaan dib uqaadey buuryadi gebi ahaanba banaanka soo dhigeysa laakiin markii dambe maysan soo laaban oo waxaan gacanta ku qabtay xanuun yar, markaan kaadiyo ma haysto Dhibaatooyin ama barar midkoodna, marka guskaygu kacsan yihiin wax xanuun ama dhibaato ah ma qabo illaa aan ka siigaysanayo oo aysan waxyeello u geysanaynin sidaas, xaaladdan qalliinku waa lagama maarmaan, waxaan ahay 16 sano jir. sumcadaydu wali waa isku mid kamana baxeyso gadaal marka kaliya milicsiga ayaa xoogaa la arkaa Miyaan ubaahanahay suuxdinta?
Kujawaab diego mamani ancasi
Iga raali noqo, ilmahaygu wuxuu leeyahay faraantiga laga laaban karo, xoog ayaa jira, gudniinku waa afar sano
Ku jawaab mayra
Haye, magaceygu ​​waa Rodrigo, waxaan ahay 17! Hagaag waxa igu dhacaya waa inaan dib u jaleeci karo maqaarka hore ee indhaha, laakiin dadaal waxaan haystaa frenulum gaaban oo giraanta phimotic waa la ogaan karaa laakiin wax dhib ah kuma qabin xanuunka gubanaya ee aan soo sheegnay markaan wax kaadido lahayn! Ma noqon kartaa in dhibaatadu ay ku jirto frenulum-ka? waa inaan haysto frenulum-ka oo ah in dun maqaar ah oo ku taal geesaha frenulum-ka aan ku dhajiyay qayb ka mid ah buuryada oo waxaan u maleynayaa in halkaas goynta buuryadu ay weyneyso! CAAWI OO AAD BAAD U MAHADSAN TAHAY
Haye! Subax wanaagsan dhamaantiin!
Waxaan dib ugulaaban karaa maqaarka gadaashiisa si caadi ah si aan u muujiyo dhamaan baalalka, laakiin markii guskaygu kacsan yahay, giraan maqaar ah ayaa ku samaysma taajkii finanka qayb ahaanna way daboolaysaa. Waxaan dareemayaa xoogaa xanuun markaan rabo inaan hoos u dhigo, waxaan umaleynayaa inaan maqaarka siyaado ah leeyahay, miyaa phimosis? Miyaan ubaahanahay gudniin? Miyaa lagu xalin karaa boomaatada corticosteroid?
Ku jawaab Andreas Herrera
Waad salaaman tahay, in mudo ah markaan la joogo galmada xaaskeyga, buuryadayda way jabtaa waana xanuun badan tahay waana bararsan tahay, waxay noqon kartaa phimosis inaan u tago Urologist.
Haye, waxaan ahay 52 jir, gushaydu waxay leedahay frenulum aad u gaaban markasta oo aan galmo sameeyo, kacsi dhaca iyo dembi waxayna iga dhigeysaa sida quason madaxa madaxa weyn oo way xanuunaysaa inaan xidho
Ku jawaab Wilter zambrano
Waa hagaag waxaan u maleynayaa in dhibaatadaydu ay ka sii daran tahay waxaan ahay 30 jir waxaan u maleynayaa inaan ogaaday waqti dheer laakiin ma aanan siinin muhiimad waqtigaan ma saari karo guskeyga si kasta ha ahaatee tan darteed waxaan ku arkaa nabar cad gudaha iyo casaanka guska Xitaa ma yeelan karo galmo galmo la'aan kondhom maxaa yeelay hadaan saas yeelo, dhiigu waa badan yahay, waxaan jeclaan lahaa inaad iga caawiso inaan kula taliyo takhasusle halkan jooga Koonfurta Florida, mahadsanid
Jawaab Ricardo Gonzalez
Hal su'aal, waxaan ka imid Cordoba dhibaatadanna waan qabaa, laakiin durba way i xanuun badan tahay mana ogi wax aan sameeyo si aan u bogsiiyo taasi ma dhaawaceyso
Haye, iga raali noqo, wadatashigeygu waa ka dib markii aan ku dhacay cillad aan caadi ahayn, xuubka guska ayaa la saaray
Maaddaama bunni ahaan ay uga sii yaraanayaan dhinacyada kala duwan, doofaarro badan ayaa i dhibaysa, dahaadhku si fiican uma socdo
Maxaan ka qaban karaa kiisaskaas?
Waad salaaman tahay waxaan ahay 53 sano waana markii iigu horeysay ee ay sidan oo kale igu dhacdo, waxaan hayaa maqaarka daboolaya buuryada, markaan caadi ahay waxba ma dhacaan, laakiin dib uma soo celin karo maqaarka, waxaan leeyahay giraan xiran oo aan bixi doonin oo aan buuryada ka sii daayo, waa maxay tan ??? ma jiraan kareemo ama wax la gashado?
Waad salaaman tahay waxaan ahay 15 jir waxaan kujiraa fasalka V laakiin waxaan aad uga walwalsanahay sababta markay tahay (xasilloonida kacsi la'aan) haddii aan dib uga noqon karo, laakiin markay i siiso kacsi waxay isku dayday inay ka laabato wayna xanuunaysaa laakiin dhamaadka waan awoodaa oo qof ayaa ii sheegi kara waxa la sameeyo fadlan !!!
Haddii aad dooneysay inaad ogaato sababta buuryadu u adkaato oo darbiyadeeda ay u dhaawacmaan oo markii aad taabato ay la mid tahay inay xoqayso ama diirineyso maqaarka
Waad salaaman tihiin, magaceygu ​​waa Jorge, waxaan u maleynayaa in kiiskeygu uu yahay lambar 2 mana aqaano waxa la sameeyo, markii ay igu dhuftaan guska ma dhaawaceyso waxaanan isku dayaa inaan taabto indha-indheynta waana xanuun badan, waa sidii oo ay i xoqday. Ma jiraa daawo aan xanuun la dareemin iyo in daaha daboolka laga jaro?
Waad salaaman tihiin, magaceygu ​​waa Anthony, waxaan ahay 21 jir sida muuqata waxaan la ildaran yahay cudurka loo yaqaan 'Phimosis', laakiin ma ogi sida saxda ah da'da aan ku soo qaatay. Waqti ayey qaadataa & waxaan rajaynayaa inaay goor dambe noqon. Haddii aad arki karto rubuc ka mid ah buuryada maqaarka, haddii aan xanuun dareemo marka aan la galmoodo lammaanahayga, waxay u dhowdahay sida uxiran yahay & dhibicleysan oo ay ku taal kaliya hal laf oo god ah ama ka yar meesha aan ku kaadiyo. Fadlan ma i caawin kartaa Waan ku qanacsanahay
Jawaab Anthony Fernandez
MARINO SANCHE CUESTA MAIL dijo
Waxaan ahay 44 jir dhawaanahan markaan galmo sameeyo waxay iga dhigaan ragitas yar oo kuyaala agagaarka prepusio-ka dhawaanahan markay i bogsadaan waxay isu bedeshaa cag meesha ay ku bogsato weyna igu adagtahay inaan muujiyo indha indheynta.
Jawaab MARINO SANCHE CUESTA CORREO
Damaris Martínez niyada dijo
Waa salaaman tahay, sidee ayuu ninkaygu ku haystaa dhibaatadaas waxaanan jecelahay inaan ogaado waxa dhibaatada u sababaya maxaa yeelay weligeed horay ugama dhicin isaga oo horeyba sannad iyo badh baynaan u haysan karin asturnaan
Ku jawaab mooralka Dámaris Martínez
Jorge Ake Rodriguez dijo
Waa salaaman tahay, waxaan ahay Jorge, waxaan ahay 59 sano jir, waxaanan leeyahay dhibaato ah inaanan ka noqon karin maqaarka ama buuryada maqaarka si aan u soo saaro milicsiga oo xoogaa way gubataa marka la kaadiyo, laakiin arinta layaabka leh ayaa ah inaan ogaaday maalin galmada ka dib iyo waxa ugu yaabka badan ayaa ah ka hor haddii aan sameyn kari lahaa inaan dhaqo indhashareerta …… Waxaan rajeynayaa inay igu hogaamin karaan arintan. Salaan iyo mahadsanid horay ………………
Jawaab Jorge Aké Rodriguez
Waad salaaman tihiin, in cabaar ah ayaan dhibaatadan qabaa waana xanuun badan aniga inaan la galmoodo lammaanahayga, waxaan ku jiraa marxalada 4-aad waxaanan jeclaan lahaa inaan ogaado waxa ay tahay boomaatada ama daawada aan isticmaalo
Jawaab Adrián Vera
Waxaan ka baqayaa vasquez dijo
Dhibaatadaydu waxay tahay in guskaygu uu sameeyo meegaar ama uu ku jaro maqaarka buuryada oo uu isu rogo caddaan yarna qaro weyn.
Ku jawaab Temo vasquez
Haye, waxaan ahay jhoss, saaxiibkey guska ayaa daboolan mana soo degi karo, ma i caawin kartaa?
Waa salaaman tahay, sidee ku saabsanaa laba maalmood ka hor waxaan galmo sameeyay cinjir la'aan, dhab ahaantii, waxay ahayd markii iigu horreysay ee aan sameeyo anigoon isticmaalin cinjirka galmada, marka la soo koobo, dhibaatada i haysata ayaa ah in aan qaawiyey buuryada si aan madaxa uga saaro madaxa xubin, waxaan sameeyay galmo galmo dhib la'aan waxaan dhameeyay cilaaqaadyadeeydii laakiin buuryadu kuma laaban meeshiisi iminkana labo maalmood ayaa iga gudbay waana soo celin kari waayey runtiina waa raaxo daran tahay maxaa yeelay waxaan dareemayaa xasaasiyad badan aniga bilaw inaad yeelato kacsiyo badan maalintii oo dhan dhibaatadu waxay tahay inay xanuunto markasta oo aan kacsado oo hareeraha madaxa guska wuxuu umuuqdaa xoogaa bararsan oo guduudan, runta aad ayaan u baqayaa waxaana jeclaan lahaa inaan aado a dhakhtar dhibaatadu waxay tahay waxaan ka maqanahay wadankayga waxaanan ugu laabanayaa ilaa afar usbuuc si aan u booqdo dhakhtar laakiin runta aad iyo aad ayaan u dhib badanahay markasta waxaan dareemaa raaxo daro waxaan rajaynayaa in qof uu kugula talin karo wax ama waxa la sameeyo ama uun yimaado hoos maalmahan
Dhibaatada ayaa i haysata oo ah inaan ka laabto maqaarka ama maqaarka hore ee maqaarka si aan u soo saaro cirbadaha oo xoogaa way gubataa markii la kaadiyo, laakiin arinta layaabka leh ayaa ah inaan ogaaday maalin kadib galmada iyo waxa ugu yaabka badan ayaa ah ka hor hadaan sameyn karo Waxaan rajaynayaa oo ay igu hagi karaan arrintan. Salaan iyo mahadsanid horay ………………
Qaliin ayey ku sameeyeen qalbigeyga waxayna u saareen tuubada kaadida waxayna sababeen infekshin aad u weyn, khabiirka yuuro waxay i siisay antibiyootiko la yiraahdo citrofloxacin 500mg., Waan qaatay qaar badan waxayna ku sii daayeen cudurka kaadida ilaa hadana waan qabaa caabuq . si xamaasad leh, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii uu jiro kareemo iga caawiya inaan si tartiib ah u bixiyo, fadlan aad ayaad ugu mahadsantahay kahor.
FAYOOMISIS CUDUR MAAHA !!!!!!!
SALAAN DALKAYG WUXUU KU SOO BADAN YAHAY XIRIIR KASTA OO GALMO AH WAAN KA CASRIYAA MAQAARKA U Dhow Jabka Jeebka Waxaana Jira Sidii Ilmada oo kale, WAQTI BADAN OO DHIIFATAY. WAY KU FILAN TAHAY. MA GARAN KARO HADDII AY TAHAY KIIS KASTA OO FAYOISIS AH AMA HADAY CAAFIMAD LEH
SALAAN DALKAYG WUXUU KU SOO BADAN YAHAY XIRIIR KASTA OO GALMO AH WAAN KA CASRIYAA MAQAARKA U Dhow Jabka Jeebka Waxaana Jira Sidii Ilmada oo kale, WAQTI BADAN OO DHIIFATAY. WAY KU FILAN TAHAY. MA GARAN KARO HADDII AY TAHAY KIIS KASTA OO FAYOISIS AH AMA HADAY CAAFIMAD LEH 04247004823
Justin dhoobo dijo
Waad salaaman tahay, raali noqo:
Markay tahay p *** waxaad kaliya ogaan doontaa daloolka kaadi mareenka (Khadka timaha ee p ***). hoos ugama dhaadhacdo illaa inta indha indheynta gebi ahaanba la ogaanayo ...
Fadlan talo ma i siin kartaa !!!
Jawaab Justin Clayn
Waad salaaman tihiin, ka dib markaan u galmooday saaxiibaday oo aan qabo phimosis laakiin waqtiga galmada waxaan dareemayaa maqaarka daboolaya guska oo hada waxaan dareemayaa gubasho iyo dhiigbax markaan musqusha aadana way gubtaa.
Jawaab carlos lopez jimenez
JOHN RAMOS dijo
WALAAHI WAA MAHAD LEH ILAAHAY WAAN KU SAMEEYAA FILIMISO FILMISO, Waxaan U maleynayaa inay tani noqoneyso waxa ugu wanaagsan ee aniga igu soo kordhay,
Jawaab JUAN RAMOS
Waxaan ahay 35 sano waxaan caadiyan masturbate maalin kasta oo kale hal mar oo aan biyo baxayn, dhawaanahan waxaan arkay in fadhi kasta ka dib galladu aad u weynaato oo aysan ii oggolaanayn inaan ku daboolo buuryada. Dhowr maalmood ka dib waxay ku soo noqonaysaa xaaladeedii caadiga ahayd, laakiin ilaa ay taasi dhacdo anigu ma siigaysan karo. Maxaan sameeyaa mahadsanid
Jeans acid acid - Corrosion waa qabow
Isbeddelada dayrta-jiilaalka 2015/2016: inta udhaxeysa koofiyadaha iyo ponchos waa muuqaal